फातिमालाई ओलीले भने, 'सभामुखको भूमिकाले एमसीसी अघि बढेन, अहिले हाम्रो हातमा छैन' - Mero samachar
‘फातिमालाई ओलीले भने, ‘सभामुखको भूमिकाले एमसीसी अघि बढेन, अहिले हाम्रो हातमा छैन’’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखको भूमिकाका कारण एमसीसी अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नै निवास बालकोटमा शिष्टाचार भेट गर्दै ओलीले सत्तामा हुँदा आफूले अघि बढाउन खोज्दा विभिन्न व्यक्तिबाट अवरोध भएको र अहिले प्रतिपक्षीमा भएकाले आफ्नो हातमा नभएको स्पष्ट पारे ।
भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईका अनुसार ओलीले सत्ताको पोजिसन क्लियर नभएसम्म अहिले एमसीसीमा धारणा नबनाउने जवाफ दिएका थिए ।
‘एमसीसीको विवादका विषयमा उहाँहरु (फातिमा)ले आफ्नो धारणा सुनाउनुभयो । यहाँको अवस्थालाई हेरेर धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छौं । लामो समयसम्म नगोसिएसन भएर टुंगिएको विषय हो । अहिले जुन विवाद आयो यो नहुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्नुभयो,’ भट्टराईले भने, ‘ओलीले आफूहरु सत्तामा रहँदा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले अघिल्लो सरकार (देउवा) ले गरेको सम्झौता भए पनि दुइटा मुलुकबिच भएका सम्झौता निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पार्टीभित्रै कतिपय रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौं । हामीले संसदमा टेबल गरिसकेका छौं । सभामुख लगायत केही व्यक्तिको भूमिकाको कारणले अघि बढ्न सकेन भन्नुभयो ।’
अध्यक्ष ओलीले अहिले आफूहरु प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै एमसीसी पास हुने/नहुने सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्भर रहेको बताएका थिए ।
‘हाम्रो भूमिका बदलिएको छ । हिजो सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौं आज विपक्षमा हहुँदा मिल्दैन । यो विषयमा सत्ता पक्षले हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन । कुनै निर्णय पनि आएको छैन । कुनै अप्रोच पनि गरेको छैन । यो अवस्थालाई यहाँहरुले यहीँ हिसाबले बुझिदिनुस्,’ ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने ।
भट्टराईले सत्तारुढ दलले के गर्न चाहिरहेको भन्ने थाहै नपाएर एमाले बोल्न नमिल्ने बताए । त्यो भन्नु अपरिपक्व हुने उनको भनाई छ । ‘त्यहीँ भएर हामी हतारिएर बोल्ने कुरा छैन । पहिला सत्तारुढ पार्टीको पोजिसन आओस् । सायद उहाँहरुलाई हाम्रो साथ नचाहिन पनि सक्छ । किनभने १६५ अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनका लागि दिइसक्नुभएको छ । जब उहाँहरुले १६५ हामीसँग किन चाहियो भनेर हामीलाई इग्नोर गरेको पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग चासो नै नराख्ने भनेपछि हामीले के बुझ्ने त ? भन्दा अहिले विपक्षी आवश्यक छैन । सत्ता दलले आफ्नो हिसाबले लिएर जाने भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
भट्टराईले सत्ता पक्षबाट प्रस्ताव आएपछि पार्टीले निर्णय गर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीको कुरालाई एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले सहज रुपमा लिएको भट्टराईले दाबी गरे ।